Golaha guurtida Somaliand oo muddo kordhin cusub loo sameeyay, maxaase Sababay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Golaha guurtida Somaliand oo muddo kordhin cusub loo sameeyay, maxaase Sababay?
Kulankii maanta ee Golaha Guurtida ee Somaliland
Hargeysa (Halqaran.com) – Golaha Guurtida ee Xukuumadda Somaliland oo Axaddii maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa muddo kordhin cusub u sameeyey golaha wakiillada maamulkaas.
Kulankan oo ay soo xaadireen 71 mudane ayaa muddo kordhinta u qaaday cod gacan taag ah, iyadoo ay 70 ka mid ah u codeeyeen in laba sano loogu daro golaha wakiillada kuraastana ku sii fadhiyaan.
Labada Gole ee Guurtida iyo Wakiillada ee Somaliland ayaanan wax doorasho ah gelin muddo ku dhow 15 Sano, waxaana mar walba ay sameysanayeen muddo kororsi.
Muddo kordhinta maanta loo sameeyay golaha wakiillada ayaa ah tii lixaad ee loo kordhiyo muddada.
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay Somaliland ka taagnaa khilaaf siyaasadeed sababay in mararka qaar ay magaalooyinka waaweyn ka dhacaan qalalaase iyo rabshado ay iskaga hor imaanayeen xukuumadda hoggaamiye Muuse Biixi iyo taageerayaasha xisbiga Waddani.
Ugu dambeyn, waan-waan iyo nabadeyn laga dhex waday labada dhinac ayaanan wax natiijo ah ka soo bixin, iyada oo laga digayo in uu sii socdo khilaafka siyaasadeed ee qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga Waddani xabsiga loo dhigay.
cod gacan taag ah
Kulanka ku yeesha Hargeysa
taageerayaasha Xisbiga Wadani